Isitofu sokugonya iRashiya Sputnik V COVID-19 sivunyiwe ukuba sisetyenziswe ngokungxamisekileyo e-Indonesia
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndonesia eziQhekezayo » Isitofu sokugonya iRashiya Sputnik V COVID-19 sivunyiwe ukuba sisetyenziswe ngokungxamisekileyo e-Indonesia
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Iindaba zaseIndonesia eziQhekezayo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
I-Arhente yeSizwe yase-Indonesia yoLawulo lweziyobisi kunye noLawulo lokutya uPenny Lukito
"I-Arhente kaZwelonke yeziyobisi kunye nokutya ivumile olunye ugonyo lwe-coronavirus, uSputnik V, ngoLwesibini, nge-24 ka-Agasti," ingxelo eshicilelwe namhlanje kwiwebhusayithi ye-Arhente kaZwelonke yoLawulo lweziYobisi kunye noLawulo lokutya ifundeka njalo.
I-Indonesia iyalivuma iyeza lokugonya elenziwa ngesiRashiya.
Uvavanyo olupheleleyo lwamayeza lwenziwe.
I-Indonesia ukuza kuthi ga ngoku irekhode ngaphezulu kwe-4,000,000 ye-COVID-19 yamatyala.
I-Arhente yeSizwe yase-Indonesia yoLawulo lweziyobisi noKutya ibhengeze ngolwe-Lwesithathu ukuba iyeza elenziwe nge-Russian Sputnik V coronavirus livunyiwe ukuba lisetyenziswe ngokungxamisekileyo elizweni.
"I-Arhente kaZwelonke yeziyobisi kunye nokutya ivumile olunye ugonyo lwe-coronavirus, uSputnik V, ngoLwesibini, nge-24 ka-Agasti," ingxelo ipapashwe namhlanje kwiwebhusayithi yelizwe. I-Arhente kaZwelonke yoLawulo lweziyobisi noKutya ufunda.
Intloko ye-arhente uPenny Lukito uthe uphononongo olunzulu lwamayeza lwenziwe. Uye wongeza ukuba ukusebenza kukaSputnik V kuma kuma-91.6%.
Ingxowa mali yaseRussia ngqo yoTyalo-mali (i-RDIF), yathi i-Indonesia lilizwe lama-70 lokuvuma oko ISputnik V. Inani elipheleleyo lamazwe agunyaze isitofu sokuthintela iRussia zizigidi zezigidi ezine, esenza i-50% yabemi behlabathi.
"I-Indonesia lelinye lawona mazwe anabantu abaninzi e-Asiya kwaye ukufakwa kwe-Sputnik V kwipotfoliyo yesitofu kuzwelonke kuya kubonelela ngokusebenzisa esinye sezona zitofu zikhuselekileyo nezona zisebenzayo ehlabathini," utshilo u-CEO we-RDIF.
I-Indonesia ukuza kuthi ga ngoku irekhodishe ngaphezulu kwezigidi ezine zamatyala e-coronavirus, ngaphezulu kwe-128,000 yokufa kunye ne-3.6 yezigidi zokufumana kwakhona. Abasemagunyeni belizwe ngaphambili bavumile ukusetyenziswa kwezitofu zokugonya ze-coronavirus eziveliswa yi-Sinovac, iSinopharm, i-AstraZeneca, iModerna kunye ne-Pfizer.